Markay Gabadhu Rabto Inay Wax Dhasho–Hooyo noqoto | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka January 2, 2016	0 235 Views
Muqdisho (Himilonews) – Dhedigta gabannimada ku uureysta aalaaba waxaa lagu eegaa fiiro sirgaxan – loona fishaa inay shil ku dhaceen.
Hayeeshe, Sawir-qaado xarunteedu tahay Roma oo lagu magacaabo Stephanie Gengotti waxay ogtahay tiro dhowr hooyooyin da’yar ah kuwaas oo, tiiyoo ay jirto caqabado bulsheed iyo maaliyadeed, si hibasho leh ku yagleelay qoysaskooda gaarka ah aroor hore.
“Aad bay gebigood ugu faraxsan yihiin doorashadooda,” ayay tiri Gengotti. “Dhab ahaanna waa hooyooyin wanaagsan, sidoo kale. Si fudud bay ula qabsadaan. Waxaadna moodaa in loo dhalay xaggeeda.”
Gudaha jidaal la magac baxay “9 Bilood,” Gengotti waxay kula qaadatay ku dhawaad laba sano gabdho yar oo ku nool degmada Naples ee Talyaaniga xilli ay xaamilo iyo hooyo-nimo ku sugnaayeen. Waxay la jiifsatay gurayahooda: la kalkaalisay caruurtooda: lana sameysay xiriir horumar adag qoysaska si ay ula wadaagaan sheekooyinkooda.
Gengotti waxay sheegtay inay kol hore aragti ahaan ku heysay xaqiiqada balse ay hubsatay in Naples ay tahay kobta ugu badan oo ay ku nool yihiin da’yar xaamilooyin ah gudaha Talyaaniga. Sidaas darteed, waxay go’aansatay inay aado xarun tala-bixineed oo ku taalla Naples – taas oo ah kob gabdhaha xaamilada ah ay ku helaan gargaar bulsho – waxayna la kulantay qaar kamid ah.
Dhaqtar ayaa baray shan gabdhood oo hooyo-nimo isku diyaarinaya – shintirsanayaa sidkooda.
Laba kamid ah waxay ahaayeen walaalo kuwaas oo kala uureystay bil kahor: Angela oo 17-jirad ah iyo Virna oo 14-jirad ah. Uurka Virna wuxuu ahaa ahaa kadis, hayeeshe, way taqiin midka uureeyey taniyo 11-jirkeedii. Afarta kale waxay durba noqdeen hooyooyin.
“Mid kamid ah gabdhaha, ayaa ku tiri: ‘Waxaynu joognaa sanadka 2010, dabcanna waan ogaa sida la iskaga soo xaaqo ilmaha. Hayeeshe, waxaan go’aansanaa inaan ilmo dhalo,’ “ ayay tiri Gengotti.
Gabdhaha ay Gengotti la kulantay heer ahaan waxay kasoo jeedaan qoysas meel dhaxaad ah dhaqaale ahaan, hayeeshe dowladda kama helin wax deeq ah oo hooyo la siiyo. Dowladdu waxay kaliya ku deeqdad gargaar haddii aabayaashu aanay aqbalin caruurta balse kiisaska gudahooda way dhacday in aabayaashu diidaan caruurta ayay tilmaantay.
Badi gabdhaha waxay la nool yihiin waalidkooda inta korinayaan dhallaanadooda waxaana la jooga gacal-banaan “fiancés.” Gabdhaha qaar iyo saaxiibadooda wax kuma tari karaan naftooda iyo ilmahooda hayeeshe, qoysaskooda ayaa gurmad u ah.
Hooyooyinka gabdhahan xaamilooyinka ah waxay iyaguba ku dhaleen xilli ay da’yaraayeen – gu’ooda 30-jir – hooyooyin cusub waxaa dhacda inay ka yimaadaan qoysas ballaaran leh walaal, ina abti, ina adeer iyo ina eedo. Waana taas sababta ay ula qabsadeen daryeelka ilmahooda.
Virna iyada oo xaamilo ah ayay aadaa iskuulka. Way idleysay tacliinta haddana waxay ka shaqeysaa xarun lagu qurxiyo dumarka. Angela sidoo kale wali waxay ku jirtaa heerka waxbarashada iyada oo xog-heyn u ah gar-yaqaan.
Hooyooyinka yaryar ee Gengotti la kulantay gebigood waxay horay ugu socdaan nolosha cusub: gadaasha dariishada ee shibta iyo shan-qar la’aanta ah, waynu la yaabnaa haddii tani lagu tilmaami karo mas’uuliyad darro ama dhiirranaan,” ayay Gengotti ku qortay mareegteeda.
Jidaalkeeda laguma daabicin gudaha Talyaaniga: waxay la tahay tani inay sabab u tahay saameynra ay diinta Katoolliga dalkeeda ku leedahay. Mid kamid ah kuwii la wareysatay ayaa u sheegay inaanay isku daalin ka hadalka xeerka ilma-xaaqista. Xaamilooyinka da’yarta ah aad loogama hadlo wararkooda ayay tilmaantay.
“Qofna ma oga waxa socda,” ayay tiri Gengotti.
Jidaalkani wuxuu is-badal ku noqday nolosha Gengotti. Kahor mashruuca, way ka cabsan jirtay inay ilmo iskeed u dhasho. Qeyb kamid ah laba-labeynteeda, waa inay xoogga saari jirtay xirfadeeda, waxayna ismoodsiin jirtay inaanay wax badan sii shaqeyn karin hadday wax dhasho.
Hayeeshe kadib ku dhawaanshaha hooyooyinka da’da yar, waxay go’aansatay inay kamid noqoto, xilli ay 40-jir tahay. Hadda waxay korsataa cunug 3-bilood jir ah.
“Waxay ila tahay in kolka aad sheeko tebiso ama aad tis-qaado mashruuc, waxay kuu tahay waddo aad naftaada wax kaga xalin karto. Waxay wax-gal la tahay sheeko qofnimadaada ku saabsan,” ayay tiri. “Laga yaabee waan go’aansaday inaan sidaas falo waayo waxaan ka baqi jiray inaan hooyo noqdo.”
Stephanie Gengotti waa sawir-qaado xarunteedu tahay magaalada Roma ee dalka Talyaaniga.
Previous: Runta Madow ee Nolosha Gabdhaha Iskoolleyda Dalka Japan
Next: Dalai Lama: Nabi Mohamed waa Tusaalaha Nabadda iyo Jaceylka
Erey-bixinta DUUR-JOOGTA iyo Soomaalida!!
Ninka leh Gar Shinni